Izindaba - Ngabe Ngidinga Uwoyela Ophakeme Wamamayela?
Ukuguga kuyingxenye yempilo. Njengoba iminyaka ihamba, izingxenye ezisenza sithikameze azisebenzi kahle njengakuqala. Izimoto zinendlela efanayo. Ziyaphela, nezimoto ezindala ezinamamayela aphezulu zidinga ukukhushulwa okwengeziwe ukugcina izinto zihamba kahle. Yilapho uwoyela we-mileage ephezulu ungena khona!
Njengoba nje ungathatha izinyathelo zokuhlala uphilile kamuva empilweni, unganikeza nemoto yakho uwoyela ophakeme kakhulu ukusiza ukunqanda ukuwohloka nokudabuka okuhlobene nokuguga. Kepha wazi kanjani ukuthi sekuyisikhathi sokuqala ukuyisebenzisa? Ezimotweni ezinamamayela angama-75,000 noma ngaphezulu, isikhathi singaba manje.
Ngakho-ke, uyini ngempela uwoyela we-mileage ephezulu?
Njengoba igama lisho, lolu hlobo lwamafutha ezimoto lwakhiwa ukubhekana nezinkinga ezithile ezihlangatshezwa yizimoto eziphakeme, noma lezo ezinamakhilomitha angaphezu kwama-75,000. Kungasiza ekunciphiseni ukusetshenziswa kukawoyela, intuthu, kanye nokukhishwa okuvela ezinjinini ezindala. Uwoyela we-mileage ephezulu nawo usebenza ukunciphisa ukuvuza nokhokho be-oyili.
Ngenkathi ungasebenzisa uwoyela we-mileage ephezulu emotweni encane ngaphandle kokuyilimaza, izingqinamba amakheli ka-oyela wamamayela aphezulu ngokuvamile awaveli ezimotweni ezinamakhilomitha angaphansi kwama-75,000.
Usebenza kanjani uwoyela we-mileage ephezulu?
Uwoyela we-mileage ephezulu usebenza njenge-multivitamin enamandla, ubuyisa izingxenye zezinjini ezigugile futhi uvimbele ukuwohloka okuqhubekayo.
Njengoba ama-conditioner angaphakathi kukoyili wamamayela aphezulu enweba futhi evuselela izimpawu, uwoyela omncane uyaphuma enjinini yakho. Lokhu kuholela ekusetshenzisweni kukawoyela okuncane, okusho ukuthi ukushintshwa kukawoyela okumbalwa nezinkinga ezimbalwa zenjini ngaphansi komgwaqo.
Owoyela abaphezulu be-mileage baqukethe ama-antioxidants ahlukahlukene, okokuhlanza, nezithasiselo zokwehlisa ukugqokwa nokungqubuzana — zonke izinto ezizuzisa izinjini zidlule ebudaleni bazo. Lezi zithako zihlanza ukungcola nodaka okwakha ngokwemvelo ngokuhamba kwesikhathi, ngenkathi ngasikhathi sinye kunciphisa ukungqubuzana ukuze injini yakho ihlanze njengekati.
Ngubani odinga uwoyela we-mileage ephezulu?
Izimoto ezingaphezu kuka-75,000 ku-odometer yazo ngokuvamile zingazuza ngamafutha aphezulu wamamayela. Izimoto ezindala ezinamamayela ambalwa nazo zingazuza, njengoba izimpawu zezinjini zingaguguleka ngokuhamba kwesikhathi kungakhathalekile ukuthi zihamba kanjani. Izimpawu ezonakele zisho uwoyela ovuzayo, kanti uwoyela ovuzayo usho ukuthi injini yakho ayisebenzi ngokusemandleni.
Ungahle ufune ukushintshela ku-oyela we-mileage ephezulu uma:
§ Uyibuyisela emuva imoto yakho egalaji bese uthola amabala kawoyela phansi lapho ibipakwe khona imoto yakho. Ukudonsa uwoyela kungakhombisa ukukhululeka kwezingxenye zenjini.
§ Ubheka ngaphansi kwesigqoko bese ubona izigaxa zikawoyela ezingxenyeni eziphansi zenjini.
§ Injini yakho izwakala kakhulu kunokujwayelekile. Umsindo odlidlizelayo ungakhombisa ukuthi injini yakho ingahlomula ngamafutha we-denser motor, okungukuthi, uwoyela ophezulu wamamayela.
Uma uzibophezele ekugcineni imoto yakho ngokuhamba kwesikhathi, namathela ezinsizakalweni zokulungisa ezihleliwe, ikakhulukazi izinguquko zikawoyela ngamafutha we-mileage aphezulu.
Ngabe injini yami izuza kanjani ngamafutha aphezulu e-mileage?
Uwoyela wamamayela aphezulu ukhuluma ngobuthakathaka obuthile enjinini yakho obuhlobene nokuguga. Kufana nomuthi wokuphulukisa wezingxenye zenjini ezisetshenziswe ngokweqile.
§ Ukusetshenziswa kukawoyela okuncishisiwe: Izimoto ezihamba ngamamayela aphezulu zivame ukuvuza futhi zishise uwoyela omningi kunezimoto ezincane ngenxa yezimpawu zezinjini ezonakele. Uwoyela we-mileage ephezulu uvuselela izimvu zamanzi ezonakele, okuholela ekusetshenzisweni kancane kukawoyela nasekushiseni.
§ Ngaphansi kwendle yenjini: Izinjini ezindala zivame ukuqoqa udaka olushiywe ngemuva ngamanye amafutha ezimoto. Uwoyela we-mileage ephezulu uyaqhekeka futhi ancibilikise udaka olusalile.
§ Ukuvikelwa ekulimaleni: Izimoto ezihamba ngamamayela aphezulu zivame ukuhlupheka ngokugqashuka kakhulu kunezimoto ezincane. Izithasiselo kumafutha we-mileage ephezulu zigcina futhi zivikele yonke injini yakho.
Ngikulungele ukushintsha uwoyela wami wamamayela aphezulu!
Kungakhathalekile ukuthi unamamayela amangaki (noma ambalwa) emotweni yakho, izinguquko zamafutha ezihleliwe zibalulekile ekugcineni imoto yakho isebenza sha, yinde. Uma ulungiselela ukushintsha uwoyela wakho olandelayo ku-Firestone Complete Auto Care eseduze, buza uchwepheshe wakho ngokushintshwa kuka-oyili wamamayela aphezulu, ikakhulukazi uma uke wabona amabala kawoyela emgwaqeni wakho noma wezwa ukuqhuma kwenjini. Ukushintsha uwoyela ngamamayela aphezulu kungasiza imoto yakho ukuthi ishaye ibanga layo elilandelayo elikhulu!
Uphawu Ingxenye, Abicah Rubber Seal, Isesekeli Esizenzekelayo, Amafutha Groove, Izingxenye ezisele, Lawula i-Arm Bushing,